Edolophini, isitudiyo esandula ukulungiswa kunye nedesika yabucala
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguCarrie
Yiza ujonge indawo yethu ekhethekileyo kwaye uhlale kwisitudiyo esisanda kulungiswa, esigcwele ukukhanya esinomnyango wabucala, umgangatho osecaleni, ikhitshi kunye nebhafu ekwilali yase-New England yaseShelburne Falls. imingxuma, inkundla yentenetya/ibhola yomnyazi, iBridge yeentyatyambo, izidlo/indawo zokutyela, imifanekiso yePothole, igrosari, amabala okudlala, iindawo zokuhamba nokuqubha, ivenkile yokutya yendalo kunye neegalari zobugcisa.Kufuphi naseBerkshire East naseZoar!
Indawo kaCarrie ikwindawo enqabileyo yaseNew England. Izitrato zineMajestic Maples, amakhaya eVictorian, abantu abakhululekileyo kunye neendlela ezilungele abahambi ngeenyawo. Sabelana nge-driveway, kodwa indawo yeendwendwe ihluke ngokupheleleyo. Kukho ikhitshi elincinci elinefriji encinci, i-cooktop yangaphakathi, i-microwave, isinki, umenzi wekofu kunye neketile yombane. Izinto eziluncedo ziquka iWiFi, iSmart TV (ibandakanyiwe neNetflix), ibhedi etofotofo yokumkanikazi, iisofa ezi-2 ezitofotofo, itafile/izitulo kunye nebalcony yabucala efakwe phantsi kweCherry eLilayo ukuze usele ikofu yakho yakusasa kunye neecocktails zangokuhlwa. Imbali, ilali enomtsalane yeShelburne Falls kukuhamba nge-10 min.
4.99 ·Izimvo eziyi-289
4.99 out of 5 stars from 289 reviews
4.99 · Izimvo eziyi-289
I-Shelburne Falls yilali encinci yaseNew England enabemi abamalunga ne-1900 unyaka wonke. Indawo kaCarrie ikumgama olula wokuhamba ukuya kumbindi wedolophu. Ukonwabele iindawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile, ivenkile yekofu, ivenkile ethengisa iincwadi, ikhawuntara yesoda endala, ivenkile yokutya yendalo, iigalari zamagcisa, iMyuziyam yeTrolley, iBridge of Flowers kunye neGlacial potholes kunye nokutyelela i-bowling alley yesibini endala kweli lizwe! Sifumaneka phakathi kwemizuzu eli-15 yokutyibilika ezantsi, emanzini amhlophe erafting, iikhosi zentambo zasemoyeni, iicoasters zeentaba, ukukhwela ibhayisekile ezintabeni, ukuqubha, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile/iindlela ezihamba ekhephuni, ukuloba, ukukhwela isikhephe, igalufa kunye nokhenketho lwe-zip line canopy. Sikumizuzu engama-30 ukusuka eNorthampton naseBrattleboro VT, iyure ukusuka eSpringfield naseBerkshires.
Umbuki zindwendwe ngu- Carrie
Sihlala kwindlu kwipropati enye kunye nezinja zethu ezi-2 ezincinci, iikati ezi-2 kunye nolutsha olufikisayo olu-3. Siyavuya ukunika iingcebiso, iingcebiso kunye neengcebiso zasekuhlaleni kodwa sihloniphe ubumfihlo beendwendwe zethu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Shelburne Falls